मासिक राशिफल : जेष्ठ महिना यी ७ राशिका लागि शुभ, तपाईको राशि कुन ? – Sandesh Munch
मासिक राशिफल : जेष्ठ महिना यी ७ राशिका लागि शुभ, तपाईको राशि कुन ?
May 14, 2020 779
मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना तपाईका लागि तसै उन्नतिकर । केही पक्षमा तनाब महशुस भएपनि अधिकांश पक्षमा अनुकूल एवं सफलताप्रद देखिएको छ। औद्योगिक व्यवसायका क्षेत्रमा अनुकूल छ भने महत्त्वपूर्ण कामकार्य बन्ने छन्।
वृष राशि हुने व्यक्तिका लागि यो महिना मानसम्मान एवं लाभ मिल्नेछ। र पनि महत्तवाकांक्षाले तनाब उत्पन्न होला । केही उपलब्धि एवं व्यवसायिक लाभ प्राप्त हुने छन्। पित्तविकार, चोट तथा हृदय रोगको सम्भावना रहेको छ। तपाईका लागि यो महिनामा भगवान सूर्य नारायण, महावीर हनुमान र भैरवदेवको दर्शन भक्ति स्तुती उपाशना गर्नु शुभदायक हुनेछ।
मिथुन राशिका लागि यो महिनामा अल्लि संघर्षकर छ। र पनि बढी मेहनतले केही उपलब्धि एवं सफलता मिल्ने छ । योजना भन्दा बाहिरको काम बनेर आकस्मिक लाभ मिल्ने छ । केही सद्सम्म व्यापार व्यवसाय फस्टाउने छन्। मानप्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ।
कर्कट राशिका लागि यो महिना संघर्ष एवं स्वास्थ्यमा प्रतिकुलताका बाबजुत केही काम कार्यमा सफलता र लाभ मिल्ने छ। पाएको आश्वासन पूरा हुन कठिन छ । तसर्थ आशा नगरेको राम्रो हुनेछ। बरु आशा नगरेको तर्फबाट उपलब्धि मिल्ने छ। ज्वरो, चोटपटक एवं घाऊ खटिरा जन्य स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने छन्।
सिंह राशि हुने व्यक्तिका लागि यो महिना कुनै पक्षमा सुधार त कुनै पक्षमा अबरोधयुक्त रहने छ। केही उन्नति एवं उपलब्धिमूलक र केही सफलता मिल्ने छ। पेशागत प्रतिष्ठा बढ्ने छ। राजनीति एवं सामाजिक भूमिका बढेर जाने छ ।
कन्या राशिका लागि यो महिना केही सुधारात्मक छ। बढी महत्त्व दिएका कार्यमा अबरोध आएपनि दैनिकी कार्यमा सफलता र उन्नति हुनेछ। व्यवसायिक प्रगति हुनेछ। समय पुरुषार्थीकर छ। कर्मयोगीहरुलाई सफलता मिल्नेछ। इष्टदेव–गुरुजन तथा आस्थामा ह्रास आउन सक्नेछ।
Prevकोरोनाभाइरसले देखायो आफैं समाप्त हुने लक्षण, २००३ मा यस्तै भएपछि सार्स पनि हराएको थियो
Nextरुपन्देहीमा एउटै परिवारका सात जनामा कोरोना संक्रमण